Aphasia: owuwu nke ahịrịokwu (akụkụ 2: nwughari) - Ọzụzụ Ọmụmụ
Aphasia: owuwu nke ahịrịokwu (akụkụ 2: nwughari)
Here nọ ebe a: Home » Maka ndị ọkachamara » Artikoli » aphasia » Aphasia: owuwu nke ahịrịokwu (akụkụ 2: nwughari)
Na post gara aga Anyị ahụla ụfọdụ chepụtara na arụmọrụ nke ahịrịokwu ahụ na adịghị ike ọ bụla. Taa, anyị ga-ekwu maka otu esi atụgharị echiche ndị a na omume mmezigharị.
Akụkụ dị mma dabere na ọgwụgwọ
Scola na ndị na - emekọ ihe gwa usoro ọgwụgwọ dabere na ụzọ abụọ na-abụghị ngwaa site na ntụziaka (ex: pushing-dọkta), mmetụta (hit-miss), ọrụ (ire-ere) ma ọ bụ mmekọrịta (wet-cika). N'ime usoro ịghọta onye ọrịa ga-achọpụta onye ọrụ ya na isiokwu nke ihe a na-eme. N’ihe banyere imepụta, onye ọrịa ga-ahọrọ otu n’ime kaadị a na-emepụtagharị ngwaa maka ọrụ ha n’edetu; ozugbo ahuru ngwaa, gha gha achoputa onye nnochi anya ma kporo ya ikpe a. Ọgwụgwọ gụnyere 6 usoro (lee peeji nke 2) na-abawanye mgbagwoju anya.
Ọbụna usoro TUF (Ọgwụ Maka nddị Ibemke) Thompson dabere na ngwaa na arụ ọrụ dị iche iche, ma ọ na-amalite site na ahịrịokwu ndị dị mgbagwoju anya, na-ewere ya na ọgwụgwọ nke ahịrịokwu ndị dị mgbagwoju anya nwere ike iduga n'ịmepụta ahịrịokwu ndị dị obere. Akpọkwara ụdị kọmputa nke ọgwụgwọ TUF Ntinye.
La Usoro ọgwụgwọ mmebi nke Springer (REST) ​​belata., nke a kapịrị ọnụ maka ndị ọrịa agrammatic na-adịghị ala ala, na-achọ ịgbasa okwu ma ọ bụ nkebi nke ndị ọrịa, na-eleghara ndị na-enye ọchị na ihe na-akwagharị anya; na omume, a na-agwa ya ka ọ kwụọ "ihe kacha mma" site na-eleghara ụfọdụ akụkụ ndị ọzọ chọrọ. Maka nke a, a na-atụle ya ịkwụ ụgwọ.
Na mmechi, emere ya nso nso a Bazzini na ndị ọrụ ibe (2012) usoro ohuru maka ọgwụgwọ nke ahịrịokwu. Ọgwụgwọ a na-ewere ọnọdụ na ọkwa isii:
Mepụta ahịrịokwu iri abụọ dị ngwa ngwa o kwere omume
Mezue ahuru ihe n’ime ahịrịokwu 20 nke okwu nkwupụta
Mezue ahuru uzo n’ime ahịrịokwu 20 na ngwaa-ihe-adịghị
Ọkpụkpụ ọgwụ flexural (nkwekọrịta)
Ọgwụgwọ nke precus
Nkwekorita nke nwanyi na onu ogugu
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Icheta ntiwapụ nke ọrịa na ọrịa neurodegenerative: aphasia na-aga n’ihu n’ihu. Alzheimer
NB: na echiche nke iji ahịrịokwu rụọ ọrụ na-abawanye, anyị mere kaadị 60 dị n'ime “Costruire le frasi”.
Ihe edemede banyere imeghari ahịrịokwu ahụ n’etiti ndị okenye
Mmechi ahịrịokwu na iji ngwaa okwu na-egosi ihe na-emetụ mma
Oru okwu na echiche oge na uwa
Ahịrịokwu na echiche nke oke
Ajụjụ: onye, ​​mgbe, olee, ebe
Mara na ike
Mmechi nke ederede
Kọwaa ọnụ ọgụgụ ahụ
A cosa na-eje ozi
Daashi: mee ka…
Lee prevized nbudata na ebipụta maka n'efu.
Ngwongwo anyi n’efu na aphasia
Gịnị bụ ọgwụgwọ CIAT maka aphasia
Aphasology: Ntụle na ọgwụgwọ ọrịa (Franco Angeli, 2019)
Mmegharị ahụ nke onye nwere ọrịa aphasia (Carrocci, 2013)
Mara ma zụlite mmụta aphasia (Science Science, 2009)
Pragmatic bịara usoro ọgwụgwọ ọrịa aphasia: site na ụdị ọnọdụ ala rue usoro Pace (Springer, 2002)
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ọrụ ndị isi na-emetụta nhazigharị nke aphasia
aphasia, ahịrịokwu ahịrịokwu, mmega ahụ aphasia, ahịrịokwu, ikwu okwu aphasia, mgbake asụsụ, nkwuputa aphasia
Aphasia: owuwu nke ahịrịokwu (akụkụ 2: nwughari)2019-09-032020-09-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/09/punctuation-marks-2999583_960_720.jpg200px200px
Aphasia: owuwu nke ahịrịokwu (akụkụ 1)Aphasia, Aphasia